बिबाह गरेर ल्याएको ३ दिन मै १८ बर्षीया युवती गर्भवती भएको थाहा पाएपछी… - Arghakhanchi Saptahik
उनले श्रीमतीलाई हेर निकै उदास देखे । सोचे, विरामी भएर होला । नभन्दै सासु ससुराले केसीलाई छोरी विरामी छ किटनीको अप्रेसन गरेर ल्याएको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला ? उनी कडकिए, किन तपाईहरुले गरेको मै गरी हाल्थे
नि फेरी मलाई खबर पनि गर्नुभएन ? उनले केही गडबढ भएको अनुमान गरेपनि श्रीमतिलाई आफ्नो घर मैरे लिएर गए । विवाह गरेपछि श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा भविष्यको योजना बनाउने विषयमा कुरा हुन्छ ।
श्रीमान माइला केसीले भने, धेरै सम्झाए धेरै बुझाए तर केही बोल्न मानिनन्, नबोलेपछि दुई तीन झाप्पु लगाएपछि आफूले गर्भ फालेर आएको स्वीकार गरिन ।’ किन विवाह गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो कुरा नभनेको त भनेर प्रश्न गर्दा
उनले बुबा आमाले जबरजस्ती विवाद गरेको बताइन्, उनले भने ।
हाडनाता करणी अन्तर्गत गर्भ रहन गएको थाहा पाएपछि गाउँहरुको भेलाले सपना
खडका र राधेश्याम खड्कालाई गाउँ निकाला गर्ने निर्णय गरेका छन् । सपना खडका र राधेश्याम खडका नातामा आफ्नै दाजुभाईका छोराछोरी (दाजु र बहिनी) हुन् ।
आफ्नै दाजु बहिनीबीच अवैध सम्बन्ध रहनु र विवाह गरेर पठाएपछि अवैध रुपमा
गर्भपतन गराउनु अपराध नै हो, उनीहरुले गर्दा घरपरिवारको सदस्यहरु समेत गाउँमा बदनाम भएको छ’,उनले भने । अझ रोचक त के छ भने, राधेश्याम खडकाको गत फागुन २६ गते गुन्सीभदौरेस्थित हिल्केटारमा मागि विवाह भएको थियो । उनकी श्रीमति हाल गर्भवती रहेकी छिन् ।
विवाह गरेको वीस दिनमै गर्भवती भएको थाहा पाएपछि घर पक्षले फिर्ता गरेपछि यो घटनालाई गुपचुप बनाउको लागि बेथानका आफूलाई बुद्धिजीविहरुले पैसा
खाएर घटनालाई अन्त्य गर्न चाहेका थिए । तर एक कान दुई कान मैदान भनेझै घटना विस्तारै बाहिर आयो । गाउँलेले वीस दिनमै फिर्ता गर्नुपर्ने कारण खोज्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बेथानमा झण्डै दुई सय जनाले हस्ताक्षर गरेर निवेदन दिए ।
केटा माइला केसी र उनका बुबा हरि बहादुर केसी र बेथानका धुव्र खडका, इन्द्र खड्का,अर्जुन खत्री र बेहुकीका काका कविन्द्र खडकाल बसेर एक लाख साठिठ हजारमा मुद्दा मिलाएका थिए । सहमति अनुसार केटा पक्षलाई ६० हजार रुपैयाँ दिने र केटीलाई अर्को केटा खोजेर विवाह गर्नको लागि एक लाख रुपैयाँ
दिने सहमति भएको थियो ।
गाउँहरुको भेलाले चार जनाको विरुद्ध मुद्दा हालेको इलाका प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायव उपरिक्षक रमेश थापाले बताए । उनले भने,‘निवेदन परेको
छ, छलफल गरेर निकास निकाल्नको लागि गृह कार्य भइरहेको छ ।’ लालीगुराँस अनलाइनबाट